We She Me: ရဲယိုရွက် ငါးပေါင်းထုပ်
TMH - 7/27/07, 11:05 AM
Wowwww....look so delicious..yummy. I wish I was there. lol.
Andy Myint - 7/27/07, 11:22 AM
Yeah? even marinated one looks delicious, huh… wish y'all were here.
sawphonelu - 7/28/07, 12:52 PM
ရှလွတ် ရှလွတ် အားယိုး
Anonymous - 7/29/07, 2:35 AM
အဟီ အမကိုပြောလိုက်ပါ.. မကြောက်ပါနဲ့လို့.. ဒီမှာ ဒူးရင်းပင် ကျက်မောက်သီးပင်တွေကို လူလစ်ရင် လစ်သလို ခူးကြတာ ရှိသေး ။ ဒါနဲ့ ရဲယိုရွက်ဆိုတာ အင်္ဂလိပ်လို ဘာလဲ သိလားဟင်.. တခါမှ မစားဖူး မကြားဖူးပါ
Andy Myint - 7/29/07, 12:58 PM
ဟုတ်လား... သရက်သီးလည်း ခိုးခူးဖူးတယ်.. အဟီး။ ရဲယိုရွက်က morinda လို့ခေါ်တယ်ထင်တယ်။
Anonymous - 7/29/07, 4:19 PM
ကိုအင်ဒီရေ.. Jurong west ဘက်မှာ ကြက်မောက်ပင်တွေ အများကြီးပဲတဲ့ ။ သူငယ်ချင်း ၂ယောက်ဆို ညနေစောင်း မှောင်ရီပျိုးမှာ.. သွားခူးတာ.. အတော်စားလိုက်ရတယ်.. အရမ်းချိုတယ်ပြောတာပဲ ၊ ဆိုင်က ၀ယ်တာနဲ့ တခြားစီတဲ့း) အဲလို ခိုးခူးရတာ ပျော်စရာကြီး ။ ဂျစ်တူးရဲ့ ဘ၀မှာ မလုပ်ဖူးသေးတာတွေထဲ အဲဒါပါတယ် ။ တနေ့တော့ လုပ်ဦးမှပါ အဟီ ။
ဒူးရင်းသီးကတော့ အများအားဖြင့် နည်း၂ တောအုပ်လေးလို ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှိတယ် ။ ခူးလို့မရပါ.. ကြွေတာစောင့်ကြပြီး အမြန်သုတ်ကြတာပေါ့ ။
ဒီရောက်စက ပိန်းနဲသီးပင်တွေရှိတဲ့ Jurong West ဘက် နေဖူးတယ် ။ အဲဒီက ပိန်းနဲသီးအကြွေတွေကို ကြောက်၂နဲ့ ကောက်စားတာ.. ချိုလိုက်တာ အရမ်းပဲ.. ။
သရက်သီးကတော့ ဗမာနီးပါး ခူးဖူးကြတယ် ။ အဲဒီထဲလည်း ဂျစ်တူး မပါသေး ။ နောက်ထပ် လုပ်စရာတခု တိုးပြီ ။
ရဲယိုရွက်ပုံတွေတွက် ကျေးဇူးပဲ အကိုရေ.. ။ အဲဒါနဲ့ ငါးပေါင်းရတယ်လို့ မသိ ။ မားသားကို ပြောလိုက်ဦးမယ်း)
ရှင်မင်း - 9/11/08, 5:17 PM
ရဲယိုရွက် ဘယ်လိုရှာရပါ့ ကိုအန်ဒီရေ၊ စားချင်စဖွယ်လေးပဲ။
Andy Myint - 9/15/08, 4:48 PM
ဟုတ်သားပဲ ရှင်မင်းရေ.. ရဲယိုရွက်ကတော့ ရှာရ မလွယ်ဘူး.. အထူးသဖြင့် ရှင်မင်းတို့ နေတဲ့ နေရာမှာ...
Anonymous - 6/22/09, 6:08 PM
မနေ့ကမှ ရွက်ယိုရွက် ငါးပေါင်းထုတ် ပေါင်းစားတယ်... ဒီနေ့မှ ကိုအန်ဒီ ပို့စ်ကိုမြင်တာ။ အမျိုးသားက သူ့အလုပ်နားက အပင်က ခူးလာတာတဲ့။ သူကမခူးတက်တော့ အရွက်ကသေးသေးလေးတွေနဲ့ နည်းနည်းလေး။ toman fillet တဗူးကုန်အောင် မနည်းထုတ်ယူရတယ်။ အရှေ့  က ထုတ် အနောက်က ပေါက်နဲ့။ ကိုအန်ဒီနဲ့ ငါးသုံးတာတူတယ်။ စပါးလင်က ထည့်ရမှန်းမသိတော့ မပါဘူး။ ဂျင်းနဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကိုတော့ သေချာထောင်းတယ်။ ငါးအသားကိုပါ မာသွားအောင် ဆုံထောင်းထဲ ထည့်ထောင်းတယ်။ နဲနဲမာသွားတော့ ပိုစားကောင်းတယ်ထင်တယ်။ ငပိတော့ မထည့်ဘူး။ ဆားနဲ့ပဲ။ ဆန်မှုန့်ကတော့ ဒီက ထိုင်းဆန်ကို ကိုယ့်ဖက်ကိုယ် လှော်လိုက်ပြီး အမျိုးသားက blender နဲ့ ညက်နေအောင် ကြိတ်ပေးတော့ ဆန်မှုန့်က လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်လေး။ မစားရတာကြာလို့လားမသိဘူး။ ကိုယ့်ကို လုပ်ပြီး ကိုယ့်ကို စားလို့ အရမ်းကောင်းနေတယ်။ အမျိုးသားကလဲ အားပေးပါတယ်။ ဖြစ်တယ်တဲ့။ အခု အရွက်ထပ်မှာထားသေးတယ်။ ဒီတခါ ပုဇွန်နဲ့ ထုတ်စားမလို့လို့။ အမျိုးသားကပြောတယ်။ မိန်းမ fine ထိရင် ၃၀၀ အနည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီတဲ့။ :)
:P - 11/2/10, 1:11 PM
ရဲယိုရွက်ရလို့ ငါးပေါင်းထုပ်လုပ်စားမလို့ ဂူဂဲလ်လိုက်တာ
ဒီဟာနဲ့က ဥာဏ်ချင်းထပ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ်..
ဖတ်နေရင်းနဲ့ ဝီရှီမီနဲ့ တူလှချည်လား ထင်နေတာ... ဟိဟိ ..
ပလတ်စတစ်နဲ့ ထုပ်နည်းတော့ သူကူးမထားဘူး...
:P - 11/2/10, 1:28 PM